Soo Celinta Recycle Bin / Trash - Undelete Recycle Bin on Windows ama Mac
> Resource > Ladnaansho > Sida loo Undelete Recycle Bin ee Windows ama Trash ee Mac
Haddii aad hadda uun ka shubeen aad Recycle Bin ee Windows ama Trash ee Mac, dhammaan lama filaan ah, waxaad ogaatay in weli ay jiraan faylal u muhiim ah aad illowdo in aad soo celiyo. Ha argagixin! Weli waxaad leedahay fursad ay ku soo celin Recycle Bin ama Qashinka inta aad si deg deg ah ku filan u dhaqmaan.
Maxaad celin karo files tirtiray ama weelna Recycle Bin ama Trash?
Marka aad ka shubeen Recycle Bin ama Trash, dhammaan faylasha lagu kaydiyaa iyaga oo ku tageen. Guud ahaan, inta badan dadka qabaa files waxaa si joogto ah loo madhiyo, maxaa yeelay, way ka heli kartaa indhahooda. Taasi ma ahayn xaqiiqda dhabta ah. Dhab ahaantii, marka Recycle Bin ka shubeen, faylasha waxa ku jira waxa kaliya ee lagu calaamadeeyay sida tirtiray oo noqon galay aan la arki karin. Taasi ma waxaad ka arki kartaa aan iyaga macnaheedu ma ay jiraan wax ka badan ma aha. Goobta qaaday faylasha tirtiray ku calaamadeysan yihiin karo u files kale. Kaliya marka aad saaray files kale oo cusub si ay u isticmaalin meel ka, waa files tirtiray runtii tageen.
Sababtaas darteed, waa mid aad u muhiim ah in asalka disk haddii aad rabto in aad undelete Recycle Bin ama Trash ka dib markii aad loo madhiyo. Ama files la overwritten doona faylasha cusub ee aad ku riday.
Sida loo soo celiyo Recycle Bin ama Trash?
Marka aad ka shubeen Bin ku Recycle ama Trash, Windows ama Mac OS ma soo celin karo files laftiisa by. Waxaad u baahan tahay caawimo ka soo qalab kabashada xisbiga saddexaad si ay u soo celiyaan Trash ama Recycle Bin . Wondershare Data Recovery for Windows 7, XP, Vista, ama Wondershare Data Recovery for Mac noqon kartaa wax fiican doorasho. Labada iyaga ka mid ah waa 100% damaanad qaaday ammaan, iyo supprts Recycle Bin ama Trash soo celin khasaara tayada files ku jirin. Waxaad isku dayi kartaa version maxkamad si xor ah u iskaan oo ku eegaan aad files lumay ka Recycle Bin ka hor inta aanad bixin. Soo qaado isku day ah!
3 tallaabo in la soo celiyo files tirtiray ka Recycle Bin ama Trash
Dooro xaq u version, download oo ku xidh on your computer. Markaasaa waxaa u abuurtaan. Next, aynu isku day Data Recovery ee Mac wada.
Just sida ay edbinta kooban oo ku saabsan interface ah, doortaan "masaxay Recovery File" inuu ka soo kabsado files tirtiray ka xijaab ama warbaahinta saari karo, sida faylasha tirtiray by "Command" + "Delete" ama weelna Trash.
Intaa waxaa dheer, haddii aadan faylasha aad loogu baahan yahay ka natiijada iskaanka ka heli, waxaad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery" sida fursad labaad. Hab kabashada Tani waxay qaadan doontaa waqti badan oo aan bixiyaan filenames asalka ah. Guud ahaan, "ayuu File masaxay Recovey" Waa ku filan tahay.
Step2. Dooro Macintosh HD u scan
Qashinka caadiga ah waa ku parition ugu weyn ee drive ee adag. Halkan ayaad joogtaa in ay doortaan Macintosh HD baaritaan.
Haddii aad isticmaalayso ku Data Recovery for Windows , waa in aad xulan C drive, waayo, aad Recycle Bin iskaan iyo soo celiyo.
Step3. Hubi oo ka soo kabsado
Scan ka dib, dhammaan faylasha recovable waxaa lagu soo bandhigaa in natiijada iskaanka ah. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi fiiles ee galka Trash mid mid si ay u hubiyaan in faylasha aad rabto waxaa la helay ama aan. Markaas dooro files doonayo iyo 1-guji si aad "Ladnaansho".
Haddii ay jiraan faylal aad u tiro badan, waxaad ka raadin kartaa adiga filename ee "Filter fursadaha" in ay si deg deg ah u hesho, ama isticmaali waa in ay qarka u saaran nooca file in aad raadinayso, sida sawirka, audio, video, dukumenti, email iyo achie ah , xataa qaabab gaar ah.
Video tutorial ah dib u soo celinta Recycle Bin ama Trash